Ucofa uHlaziyo lweWebhu uyaphinda! | Martech Zone
NgoMgqibelo, Julayi 21, 2007 NgoMgqibelo, Julayi 21, 2007 Douglas Karr
Cofa uhlalutyo lwewebhu utsale ngenye into entle!
Le yiwebhu kubahlalutyi Iphakheji ekhawuleza ibe yeyona mpahla intle ndiyibonileyo- ngakumbi iibhlog kunye nabapapashi bewebhu. Ideshibhodi iye yahlala iluncedo kwimetric- zonke zivela kwiphepha elinye.
Nantsi iDeshibhodi eNtsha:
NgoJulayi 21, 2007 ngo-9:17 PM
Ngaba uye walandela izimvo zebhlog yabo malunga nayo Doug? .. abanye abonwabanga ngayo ... yenzelwe ukonwabisa ngoMgqibelo emva kwemini ukufunda iLOL
NgoJulayi 21, 2007 ngo-9:31 PM
Ndinayo, uSteve. Andothukanga kodwa. NjengoMphathi weMveliso, ndiyibona le ndlela yokusabela ngalo lonke ixesha xa 'siphucula' imveliso okanye sikhupha into entsha. Inyaniso kukuba, abantu abaluthandi utshintsho. Nokuba iqhubela phambili.
Nali inqaku elinomdla: utshintsho aluzange lususwe ikhona ukusebenza! Yongeze ngakumbi!
NgoJulayi 23, 2007 ngo-3:18 PM
Ndiqale ukusebenzisa iClicky kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo, kwaye ndonwabile ngayo!
Ingcono kakhulu kuneGoogle Analytics 🙂
Oktobha 24, 2007 ngo-12: 47 PM
Ngaba ukhona omnye umntu oye waqaphela idatha eyahlukileyo ibuyiswa nguClicky vs. Google Analytics ecaleni kovavanyo? Sinewebhusayithi yomxhasi apho iClicky isanda kufakwa kwaye ibonisa idatha eyahluke kakhulu kuGoogle. Ngokomzekelo, ngolunye usuku uGoogle wabonisa iindwendwe ezili-18 ezikhethekileyo, kwaye uClicky wabonisa i-48 ngosuku olufanayo, kwaye oku akukona okwexesha elinye. Kuba kusenokwenzeka ukuba iphakheji enye yohlalutyo ayizukuxela idatha kunokuba enye idale idatha eyenziweyo, kufuneka ndicinge ukuba uClicky unedatha echanekileyo kodwa andikwazi ukuqonda ukuba kutheni umahluko ukhona.
Okt 25, 2007 ngexesha 11:03 AM
Josh, kuthekani ngamanye amanani, afana notyelelo kunye nezenzo, ngaba ezo zihambelana ngokusondeleyo? Iindwendwe zethu ezizodwa zibalwa ngedilesi ye-IP ngoku. Ngelixa kunokwenzeka ukuyenza ichaneke ngakumbi ngeekuki kunye noko kungenjalo, njengoko ezinye ii-apps zisenza, akukho ndlela iqinisekileyo yokuyifumana 100% elungileyo. (Abanye abasebenzisi bacima iikuki, njl.njl).
Ndiyakholelwa kumgangatho wemveliso yam, kodwa ukuba nantoni na ndingabheja ukuba amanani kaGoogle achaneke ngakumbi kunezethu. Banamashumi amawaka eeseva ezisebenzisa i-Analytics, zisasazwe kulo lonke ihlabathi. Ngelixa siyinkampani encinci emalunga neeseva ezili-10, zonke zikwindawo enye e-US. Kunzima ukukhuphisana naloo nto, ngaphandle kweebhiliyoni ebhankini.